THE PHURBA TIMES: कर्णालीको सपना नाटकमा...
कर्णालीको सपना नाटकमा...
सपनाको पारीधी सपनामै मात्र सिमित हुन्छ, यो वास्तविकतामा कहिल्ये पारीणत हुँदैन। तर यसो भन्दैमा कसैले सपना देख्न किन छाडोस् र? कर्णाली जुन आजको मितिसम्म दु:ख नै दु:खले पिरोलिएको ठाउँ हो। उस्को पनी आफ्नै सपना छ, चाहे त्यो बिहानिको कर्कराहटले भाताभुङ नै किन नपारोस? मैले भर्खरै केही दिन अगाडि एउटा इन्टरनेसनल थिएटर फेस्टिवल अन्तरगत आरोहण गुरुकुलमा हेरेर मनोरन्जन लिएको एउटा नाटक "सुइना कर्णालीका" प्रस्ट देख्न सकिन्छ, सपनाको कथा।
कथा सुरु हुन्छ, पिडाबाट र अन्त्य हुन्छ पनि पिडासगै नै। तर बिचको सपनामयी संसार भने साच्चै अलौकिक नै देखिन्छ। सपनै हो देख्न पैसा परोइन। नाटकको रमाइलो पक्ष थियो, दु:खलाई पनि प्रस्तुत गरिएको हास्यब्यङ्यको मध्यम। कर्णालीमा बिकासको ढोलक पित्न नसकिनु एउटा दु:खदायी तथ्य हो भने ७४ अमेरिकि डलर बराबर १ कर्णाली रुपैया.......
Posted by Phurba Sange Moktan at Sunday, December 12, 2010
Labels: drama review, Gurukul, Theatre